Chineke Ọ̀ Ga-anụ Ekpere M?
Teta! | Julaị 8, 2001
“Ana m ekpe ekpere banyere ihe nile n’ihi na Jehova bụ enyi m, amakwaara m na ọ ga-enyere m aka ma m nwee nsogbu.”—Andrea.
ANDREA na-eto eto ji n’aka na Chineke na-anụ ekpere ya. Ma ọ bụghị ndị nile na-eto eto nwere obi ike otú ahụ. Ụfọdụ ndị na-eche na ha nọpụrụ ebe dị nnọọ anya site n’ebe Chineke nọ nke na ọ ga-esiri ha ike ịgakwuru ya. Ha pụrụ ọbụna iche ma Chineke ọ̀ na-echecha banyere ha nke ga-eme ka o kwesị ekwesị ka ha kpegara ya ekpere.
Gịnị bụ isi ihe na-eme ka ekpere rụpụta ihe? N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ bụ ime ka gị na Chineke bụrụ enyi n’ezie. Ọbụ abụ ahụ kpere ekpere, sị: “Ndị maara aha Gị ga-atụkwasị Gị obi.” (Abụ Ọma 9:10) Gịnị banyere gị? Ị̀ maara Chineke nke ọma nke na ị pụrụ ikpegara ya ekpere ma tụkwasị ya obi na ọ ga-aza gị? Tupu ị gụrụ gaa n’ihu, biko gbalịa ịza ajụjụ ndị dị n’igbe ahụ isiokwu ya bụ́ “Ruo Ókè Hà Aṅaa Ka Ị Maara Chineke?” Ole ka ị pụrụ ịza?
RUO ÓKÈ HÀ AṄAA KA Ị MAARA CHINEKE? Azịza ha dị na peeji nke 31
1. Gịnị bụ aha Chineke, gịnịkwa ka ọ pụtara?
2. Gịnị ka Bible na-ekpughe na ha bụ àgwà anọ bụ́ isi nke Chineke?
3. Gịnị bụ ngosipụta kasị ukwuu nke ịhụnanya nke Chineke maka ihe a kpọrọ mmadụ?
4. Olee otú anyị pụrụ isi bụrụ enyi Chineke?
5. Gịnị kwesịrị ịbụ àgwà anyị mgbe anyị na-ekpere ekpe?
Ì nwere ike ịza ma ọ dịghị ihe ọzọ ụfọdụ n’ime ajụjụ ndị ahụ ugbu a, ọbụna tupu ị gụtọpụ isiokwu a? Ya bụrụ otú ahụ, ị maraworị Chineke karịa ka ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ maara. Otú ọ dị, ọ pụrụ ịbụ na azịza gị na-egosi na ọ dị gị mkpa inwetakwu ihe ọmụma banyere ya, ịbịa mara ya nke ọma karị. (Jọn 17:3) Iji mee nke ahụ, tụlee nanị ihe ole na ole n’ime ihe ndị Bible na-akụziri anyị banyere “Onye na-anụ ekpere.”—Abụ Ọma 65:2.
Chineke Bụ Onye Dị Adị n’Ezie
Nke mbụ, Bible na-enyere anyị aka ịghọta na Chineke abụghị ikike na-abụghị onye. Ọ bụ onye nke nwere aha, bụ́ Jehova. (Abụ Ọma 83:18) N’asụsụ Hibru aha ahụ pụtara “Ọ Na-eme Ka Ọ Ghọọ.” Ọ pụrụ ịghọ ihe ọ bụla ọ chọrọ ịghọ iji mezuo nzube ya. Ikike dị ukwuu na-abụghị onye apụghị ime nke ahụ! Ya mere mgbe i kpere ekpere, ị pụrụ ijide n’aka na ọ bụghị ike na-adịghị adị ma ọ bụ ikuku ka ị na-agwa okwu. Ọ dị onye ị na-agwa okwu, onye nke pụrụ ịṅa ntị n’ekpere gị na ịza ya.—Ndị Efesọs 3:20.
N’ihi ya, Diana na-eto eto na-ekwu, sị: “Ama m na ebe ọ bụla m nọ, Jehova ga-ege m ntị.” Iji nwee obi ike ahụ, Chineke aghaghị ịbụ onye dị adị n’ezie nye gị! “Onye na-abịakwute Chineke aghaghị ikwe na Ọ dị,” ka Bible na-ekwu.—Ndị Hibru 11:6.
Isi Iyi nke Amamihe na Ike
Chineke pụrụ n’ezie inyere anyị aka n’ihi na ike ya dị ebube. A kparaghị ike ahụ ókè, dị ka ịdị ukwuu na ịdị mgbagwoju anya nke eluigwe na ala a na-ahụ anya na-egosi. Bible na-ekwu na Jehova maara aha kpakpando ọ bụla—n’agbanyeghị na ha dị ijeri kwuru ijeri! Karịa nke ahụ, ọ bụ ya bụ isi iyi nke ike nile dị na kpakpando ndị ahụ. (Aịsaịa 40:25, 26) Nke ahụ ọ́ dịghị ịtụnanya? Ma n’agbanyeghị otú eziokwu ndị a dịruru ịtụnanya, Bible na-ekwu na “ndị a bụ nanị akụkụ ndị dị nta nke ike ya”!—Job 26:14, Today’s English Version.
Tụleekwa amamihe a na-akparaghị ókè nke Jehova. Bible na-ekwu na echiche ya “miri emi nke ukwuu.” (Abụ Ọma 92:5) Ọ bụ ya kere ihe a kpọrọ mmadụ, n’ihi ya kwa ọ na-aghọta anyị karịa ka anyị na-aghọta onwe anyị. (Abụ Ọma 100:3) Ebe ọ bụ na ọ dị adị “site na mgbe ebighị ebi ruo mgbe ebighị ebi,” o nwere ahụmahụ a na-akparaghị ókè. (Abụ Ọma 90:1, 2) Ọ dịghị ihe ọ na-apụghị ịghọta.—Aịsaịa 40:13, 14.
Olee otú Jehova si eji ike na amamihe ahụ nile eme ihe? Ihe E Mere nke Abụọ 16:9 na-ekwu, sị: “Jehova, anya Ya na-ejegharị n’ụwa nile, igosi Onwe ya onye dị ike n’akụkụ ndị obi ha zuru okè n’ebe Ọ nọ.” Ọ dịghị nnọọ nsogbu ị pụrụ inwe nke Chineke na-apụghị idozi ma ọ bụ nyere gị aka ịnagide. Kayla na-eto eto na-echeta, sị: “N’oge na-adịbeghị anya, mgbe mụ na ezinụlọ m nwere nsogbu, ekpegaara m Jehova ekpere, echekwara m na o nyeere anyị aka ịnagide ọnọdụ, nsogbu, na mmetụta ndị na-agaraghị ekwe nnagide ma e wezụga ekpere.” Mgbe ị na-agwa Chineke okwu, ọ bụ isi iyi nke amamihe ka ị gakwuuru. Ọ dịghị ihe ọzọ ka mma ị pụrụ ime!
Chineke nke Ikpe Ziri Ezi na Ịhụnanya
Ma olee otú i si mara na Chineke chọrọ inyere gị aka? N’ihi na Jehova ekpebiwo ime ka a mata onye ọ bụ, ọ bụghị nnọọ site n’ike ya ma ọ bụ amamihe ya dị ukwuu ma ọ bụ ọbụna site n’ikpe ziri ezi ya na-adịghị agha agha. Kama nke ahụ, e ji àgwà Jehova bụ́ ịhụnanya mara ya karịsịa. “Chineke bụ ịhụnanya,” ka 1 Jọn 4:8 na-ekwu. (Ọ bụ anyị dere okwu ahụ n’aka akwụkwọ dị iche.) Ịhụnanya ahụ nke dị ukwuu mere ka ekpere nwee ike o nwere. Ngosipụta kasị ukwuu nke ịhụnanya ya bụ onyinye o nyere Ọkpara ya dị ka àjà mgbapụta ka anyị nwee ike inweta ndụ ebighị ebi.—Jọn 3:16; 1 Jọn 4:9, 10.
Ebe ọ bụ na Chineke bụ ịhụnanya, ọ dịghị gị mkpa mgbe ọ bụla ịtụ egwu na ọ ga-eleghara gị anya ma ọ bụ mesoo gị n’ụzọ na-ezighị ezi. “Ụzọ Ya nile bụ ikpe ziri ezi,” ka Deuterọnọmi 32:4 na-ekwu. Ịhụnanya Chineke nwere n’ebe ị nọ na-eme ka i jide n’aka na ọ na-ege ntị nke ọma n’ihe ị na-ekwu. Nke a na-eme ka anyị nwee obi ike ịgwa ya echiche na mmetụta onwe onye anyị.—Ndị Filipaị 4:6, 7.
Ịbụ Enyi Chineke
N’ezie, Jehova na-akpọ anyị òkù ịgwa ya okwu. Ọ chọghị ịbụ onye ala ọzọ n’ebe anyị nọ. Kama nke ahụ, n’akụkọ ihe mere eme nile nke mmadụ Jehova anọwo na-akpọ ndị mmadụ òkù ka ha bụrụ enyi ya. N’ime ndị bụworo enyi Chineke, bụ́ ndị ihe ha dị ya mma n’obi, e nwere ndị ikom na ndị inyom, nwata na okenye. Ha gụnyere ndị dị ka Abraham, Eze Devid, na Meri, bụ́ nne Jisọs.—Aịsaịa 41:8; Luk 1:26-38; Ọrụ 13:22.
Gị onwe gị kwa pụrụ ịbụ otu n’ime ndị enyi Jehova. Otú ọ dị, ọbụbụenyi dị otú ahụ apụtaghị na i kwesịrị ile Chineke anya dị ka mmụọ karịrị ike mmadụ bụ́ nke ị pụrụ ịkpọku nanị mgbe ọ dị ihe ị chọrọ inweta ma ọ bụ mgbe i nwere nsogbu. Ekpere anyị ekwesịghị ịbụ nanị maka mkpa nke anyị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ enyị Chineke, anyị aghaghị inwe mmasị n’ihe ọ na-achọ—ọ bụghị nanị na nke anyị—anyị aghaghịkwa n’ezie ime ihe Chineke na-achọ. (Matiu 7:21) N’ihi ya, Jisọs ziri ndị na-eso ụzọ ya ime ka ekpere ha bụrụ maka ihe ndị dị mkpa n’ebe Chineke nọ. O kwuru, sị: “Ya mere, kpeenụ ekpere otú a: Nna anyị Nke bi n’eluigwe, Ka e doo aha Gị nsọ. Ka alaeze Gị bịa. Ka e mee ihe Ị na-achọ, dị ka e si eme ya n’eluigwe, ka e meekwa otú ahụ n’ụwa.” (Matiu 6:9, 10) Ekpere anyị kwesịkwara ijupụta n’otuto na ekele nye Chineke!—Abụ Ọma 56:12; 150:6.
Otú o sina dị, anyị ekwesịghị iche na mkpa anyị ma ọ bụ ihe ndị anyị na-eche banyere ha dị nnọọ nta ma ọ bụ ghara ịdị mkpa nke na anyị agaghị ekpewa ekpere banyere ha. “Ọ bụ ezie na m na-agbalị ịgwa ya ihe nile dị m n’obi,” ka Steve na-ekwu, “mgbe ụfọdụ m na-eche na ekwesịghị m inye Chineke nsogbu maka ihe ụfọdụ na-adịghị ihe ha bụ.” Mgbe ọ bụla ị malitere iche otú ahụ, gbalịa icheta ihe Jisọs ziri ndị na-eso ụzọ ya: “Á dịghị ere egwele ise na penny abụọ? ma a dịghị echezọ otu n’ime ha n’ihu Chineke. . . . Unu atụla egwu: ọnụ ahịa unu karịrị nke ọtụtụ egwele.” (Luk 12:6, 7) Nke ahụ ọ́ dịghị emesi obi ike?
Mgbe ahụ, ọ dị mfe ịghọta na ka ị na-amata Jehova karị, otú ahụ ka a ga-akwali gị karị ịgakwuru ya n’ekpere, otú ahụkwa ka ị ga-enwe obi ike karị na Jehova pụrụ inyere gị aka nakwa na ọ ga-enyere gị aka. N’ihi ya, echiche uche dị aṅaa ka i kwesịrị inwe mgbe ị na-agakwuru Chineke n’ekpere? Ọ dị gị mkpa inwe nkwanye ùgwù, ịdị obi umeala, na ịghara ịchọ ọdịmma onwe gị nanị. Ì chere na ọ dị onye ọ bụla nọ n’ọkwá dị elu n’ụwa nke ga-ege gị ntị ma i jiri mpako ma ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù rịọ ya ihe? Mgbe ahụ, o kwesịghị iju gị anya na Jehova na-atụkwa anya ka ị kwanyere ya na ụkpụrụ ya dị iche iche ùgwù tupu ọ zaa ekpere gị.—Ilu 15:29.
Ọtụtụ puku ndị ntorobịa na-atụ egwu Chineke amụtawo ịgwa Chineke obi ha. (Abụ Ọma 62:8) “Mgbe Jehova zara ekpere m,” ka Brett na-ekwu, “ọ na-eme ka m nwee obi ike na ọ ka bụ enyi m.” Gịnị banyere gị? Olee otú ị pụrụ isi nụ ụtọ ọbụbụenyị dị otú ahụ nke gị na Chineke? Ndị ntorobịa abụọ bụ́ ndị Kraịst kwuru ihe ndị na-esonụ:
Rachel: “Iji kpakwuo Jehova nso, m na-ahụ na ọ dị m mkpa ịmụ Okwu ya n’ụzọ miri emi karị, m na-agbalịkwa ịzụlite agụụ siri ike maka ịmụ ihe otú ahụ.”—1 Pita 2:2.
Jenny: “Echere m na ka ị na-etinyekwu onwe gị n’ijere ya ozi, otú ahụ ka ị ga na-enwe mmetụta nke ịnọ Jehova nso karị.”—Jemes 4:8.
Ọ̀ dịtụwo mgbe i chere banyere ókè ikpe ekpere baruru n’uru? Otu onye ntorobịa bụ́ onye Kraịst na-ekwu, sị: “M ga-enwe mmetụta nke ịnọkwu Chineke nso ma ọ bụrụ na ọ ga-agwa m okwu ma ọ bụ zitere m ozi.” Ebe ọ bụ na Jehova adịghị azaghachi site n’ịgwa anyị okwu mgbe anyị kpere ekpere, olee otú ekpere si enyere anyị aka n’ezie? A ga-atụle nke a ná mbipụta a ga-enwe n’ọdịnihu.
Azịza nye ajụjụ ndị dị na peeji nke 29
1. Jehova. Ọ pụtara “Ọ na-eme ka Ọ Ghọọ.”
2. Ịhụnanya, ike, ikpe ziri ezi, na amamihe.
3. O zitere Ọkpara ọ mụrụ nanị ya, bụ́ Jisọs, ka ọ nwụọ n’ihi anyị.
4. Site n’echeghị banyere mkpa nke anyị nanị kama site n’inwe mmasị n’ihe ndị Chineke na-achọ na ime ha.
5. Anyị kwesịrị ịdị obi umeala, na-enwe nkwanye ùgwù, gharakwa ịchọ ọdịmma onwe anyị nanị.
Ịmụ Bible na ịmụta ihe site n’ihe e kere eke ga-enyere gị aka ịmata Chineke karị
Ọgwụ Ọjọọ—Olee Ndị Na-eji Ha Eme Ihe?
Ọgwụ Ọjọọ—Gịnị Mere Ndị Mmadụ Ji Eji Ha Eme Ihe?
Iji Ọgwụ Ọjọọ Eme Ihe—Ngwọta Ya Dị!
Ibuli Udo Elu Kama Ibuli Agha Elu
Mmiri Ọ̀ Na-agwụnahụ Ụwa?
Olee Ebe Mmiri Ahụ Nile Gara?
Ịchọ Mmiri Ndụ
Ọ̀ Dị Njọ Iru Újú?
Abụ Ịhụnanya nke Abụzụ
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu MAGAZIN Julaị 8, 2001
Julaị 8, 2001
MAGAZIN Julaị 8, 2001